China China Disc Harrow Maka Agricultural 1BJ ụlọ ọrụ na suppliers | RY AGRI
1BJX ọkara harrow dị mma maka ịkụda na ịtọghe ihe mgbochi ala mgbe akọchara yana ịkwadebe ala tupu ịgha mkpụrụ. Ọ nwere ike ịgwakọta ala na fatịlaịza na ala a zụrụ azụ ma wepụ stumps osisi. Ngwaahịa a nwere usoro ezi uche dị na ya, ike siri ike, na-adịgide adịgide, ọrụ dị mfe, mmezi dị mfe, ma nwee ike ịkụpịa ma chụba n'ime ala iji mee ka ala ahụ dị larịị, ndị a na-egbo mkpa nke ọrụ ugbo kpụ ọkụ n'ọnụ.
Ihe nke diski bụ 65MN, ihe a siri ike, ya mere ọ dị mfe ire ere ala na ala ubi.
Mgbochi maka ntinye Harrow
1. Maka nkuku diski zuru ezu, ọ dị mma ịwụnye ya nke ọma, n'agbanyeghị ma ibu ahụ dị otu; maka nkpuru ahihia ahihia ahihia, iji mee ka ibu di na otu ndi otu, ndi ozo nke ogwe aka di nso gha aghaghari.
2. Iji zere na ọnọdụ ịgba agaghị enwe ike dakọtara na-akwado efere nkwado nke zaa etiti agba n'oge izugbe nzukọ, ọ dị mkpa iji hụ na ọnọdụ nke amị na zaa igwe abụghị ihe ọjọọ.
3. Iji mee ka ọkpọkọ etiti na rake jikọtara ọnụ, nnukwu njedebe nke ọkpọkọ etiti kwesịrị ịdị nso na convex convex nke rake, na obere njedebe nke ọkpọkọ etiti kwesịrị ịdị nso na concave elu nke zaa. Ọ bụrụ na enwere ọdịiche dị n'etiti mpaghara kọntaktị, ọ gaghị adị elu karịa 0.6 mm.
4. N’ikpeazụ, mee ka eriri osisi ahụ sie ike ma kpọchie ya. Ma akuku osisi a na-eme ka o sie ike ma obu na o nweghi oke mmetuta na oru na ndu nke ndi otu ahihia. Ọ bụrụ na ọ dịtụ ntakịrị, oghere dị n'ime efere harrow ga-agagharị na onye ọ bụla na akụkụ anọ. Oghere dị n'ime nke efere harrow ahụ '' gnaw '' akụkụ anọ nke oghere (ihe nkedo efere ahụ, dị ka aro ahụ siri ike), nke mere na oghere ahịhịa ahụ ga-ehulata ma ọ bụ ọbụna gbajie.
Nchekwa na ịrụzi ya na ngwụcha oge ahụ
1. Wepu ala niile na irighiri ihe ndi ozo site na uzo
2. Iho mmanu dika nkọwa ya
3.Will ga-ehicha igwe na ebe nchekwa, rụọ ọrụ dị mma maka mgbochi anwụ.
Osote: Arọ Disc Harrow Maka Ugbo 1BQX